RASMI: Mid ka mid ah xiddigihii ugu caansanaa Man United oo ku dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaarista kubadda cagta – Gool FM
(Manchester) 20 Sebt 2019. Mid ka mid ah xiddigihii ugu caansanaa ee soo martay kooxda Manchester United ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu gabi ahaanba ka fariistay kubadda cagta.
Laacibkii hore kooxaha Tottenham Hotspur iyo Manchester United ee Dimitar Berbatov ayaa shaaca ka qaaday inuu gabi ahaanba ka fariistay ciyaarista kubadda cagta, kaadib xirfad qurux badan uu soo qaatay laacibka reer Bulgaria.
38-jirkan ayaa koox la’aan ahaa 18 bilood kadib markii uu ka tagay Kerala Blasters, taasoo ka dhigtay ugu dambeyntii inuu si rasmi ah kaga fariisto ciyaarista kubadda cagta.
Waayihiisii ugu quruxda badnaa ee xirfadiisa kubadda cagta wuxuu ku qaatay horyaalka Premier League, halkaasoo uu kaga soo ciyaaray kooxaha Manchester United, Tottenham Hotspur iyo Fulham.
Dimitar Berbatov ayaa waayihiisa horyaalka Premier League wuxuu ciyaaray 299 kulan, wuxuuna ku guuleystay inuu dhaliyo 94 gool, isagoo kooxda Manchester United kula guuleystay horyaalka Premier League labo jeer.
Dimitar Berbatov ayaa boggiisa rasmiga ah ee “Instagram-ka” ku soo qoray go’aanka ah in gabi ahaanba uu ka fariistay ciyaarista kubadda cagta:
“Qof ayaa ii sheegay inaan u baahanahay inaan wax sheego, sidaa darteed waa inaan diraa fariin macsalaameen ah”.
“Kulankeygii ugu dambeeyay wuxuu ahaa wax ka badan hal sano ka hor, sidaa darteed waxaan u maleynayaa in la joogo waqtigii la joojin lahaa waa goor dambe”.
“Waqtiga wuxuu ii sheegay in ku dhawaad ​​20 sano aan kubadda cagta ciyaarayay, waana inaan joojiyaa kubadda cagta xirfad ahaan”.
Si kastaba ha noqotee, waxaa xusid mudan in Dimitar Berbatov uu u saftay xulkiisa qaranka Bulgaria 94 kulan, wuxuuna kulankiisii ugu horeeyay ka soo muuqday sanadkii 1999-kii.